ချစ်စရာကောင်းသောသက်တန့်နှင့်ရောင်စုံပိတ်မှို့ချည်မင်းသမီးမိန်းကလေး ၀ တ်အ ၀ တ်အစား - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
ချစ်စရာကောင်းသောသက်တန့်နှင့်အရောင်ပိတ်ချောမင်းသမီးမိန်းကလေးဂါ ၀ န်
အရောင် XH00091-BK XH00092 XH00090 XH00113-PK XH00113-RD XH00093 XH20144-bu XH00156-PK XH00091-RD XH00115-bu XH00160 XH00115-PK DZ00114 XH00074-GN XH00038-PU XH00038-YL MT00162 XH00075-bu
Kid Size ကို 2T 3T 4T56 12M
ချစ်စရာကောင်းသောသက်တန့်နှင့်အရောင်ပိတ်ချောမင်းသမီးမိန်းကလေးဂါ ၀ န် - XH00091-BK / 2T backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
XH00091 အရွယ် စကတ်ရှည်
(စင်တီမီတာ) တွေဆီကနေ (စင်တီမီတာ) ပခုံး
(စင်တီမီတာ) အလေးချိန် (ဆ) အမြင့်
90 55 57 23 28 179 80-84 12-18 လအတွင်း
100 57 59 24 30 191 85-89 18-24 လအတွင်း
110 59 61 25 32 202 90-96 2-3 နှစ်ပေါင်း
120 61 63 26 34 222 97-111 3-4 နှစ်ပေါင်း
130 63 65 27 36 226 112-126 4-5 နှစ်ပေါင်း
အလွန်ကောင်းသောစားဆင်ယင်! Nice ထည်။ သေသပ်စွာချုပ်ထားသည်။
လက်ဆောင်အဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ကလေးများအတွက်ဓါတ်ပုံများကိုနှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်များအပြီးမှသာရနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့! အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၊ ချည်မျှင်များမပျော့၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!